Ciidamada Maraykanka Oo Dad Beeraley Ah Ku Dilay Duleedka Afgooye.
Thursday March 19, 2020 - 20:08:24 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dhawaan ciidamo huwan ah oo isuga jira Maraykan iyo Soomaali ayaa weerar ku qaaday beer weyn oo ku taalla meel qiyaastii 5km u jirta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo ay ka geysteen tacadiyaad kala duwan.
Ciidamada huwanta ah ayaa weerarka soo qaaday xilli habeen ah, waxayna goobta ku dileen labo ruux oo kamid ahaa dadkii ka shaqeynayay beerta oo ah nooca Aseendada loo yaqaano oo ah mid weyn.
Waxay sidoo kale goobta ka kaxeysteen ugu yaraan 8 qof oo dhamaantooda ahaa shaqaalaha beerta, kuwaas oo aan la ogeyn halka ay la aadeen.
Ehellada dadka uu Maraykanku dilay iyo kuwa maqan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay iney aad uga xunyihiin tallaabada lagu weeraray dadkooda, waxayna codsadeen in dadka maqan lasoo daayo.
Waxay dadku sheegayaan in tallaabadan ay u muuqato mid si gaar ah loogu beegsanayo dadka beeraleyda ah oo la diidanyahay horumarka ganacsi ee ka jira wadanka.
Weerarkan dadka shacabka ah lagu beegsaday ayaa kusoo aadaya, iyadoo dhawaan diyaaradaha Maraykanka ay ugu yaraan lix ruux oo shacab ah ku dileen duqeyn diyaaradeed oo ay ka geysteen duleedka magaalada Jannaale ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Maraykanka iyo Dowladda federaalka ayaa dadkaas ku tilmaamay iney ahaayeen xubno katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana si kulul u beeniyay arinkaas ehelka dadkaas oo ku nool magaalada Muqdisho.
Gabar si xun loo dilay oo Meydkeeda lasoo dhigay Boosaaso.
Weerar Sarkaal ciidan lagu dilay oo ka dhacay degmada Qansaxdheere.
Diyaaradaha Mareykanka oo duqeymo dad badan lagu dilay ka geystay Waqooyiga Suuriya.